Jaban CNC warshad balaastig ah iyo alaab-qeybiyeyaal | Ouzhan
Faa'iidooyinka qaybaha caagagga leexinta
OEM caag kartoo adeegga jeestay-Shiinaha Shanghai CNC caag jeestay qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxay ka baaraandegi kartaa saxnaanta sare ee CNC oo u weecineysa qaybo balaastig ah oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka leexinta caaga. Intaa waxaa dheer, alaabada CNC ee soo rogeysa alaabada balaastigga ah oo si adag loo waafajiyay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah caag CNC u rogaya alaabada macaamiisheena qaaliga ah.
Noocyada Ouzhan qaybo ka jeestay caag
Faa'iidooyinka Adeegga Wareejinta Balaastikada Ouzhan
- Dhammaan waxsoosaarka saxda ah ee CNC u rogay alaabada balaastigga ah waxay ku xiran yihiin kormeerro tayo adag leh
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro qaybo caag ah oo sax ah.
Hore: Kaarboonka birta ah ee farsamaysan ee qalabka wax soo saarka
Xiga: Qaybo been abuur ah